थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालका चिकित्सकले शल्यक्रिया विना आमाशयमा अड्किएको चम्चा निकालेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन्। सोमबारसम्म १२ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ।
मस्तिष्कघातबाट कसरी बच्ने?
धूमपान र मद्यपान गर्ने, अस्वस्थकर खानपान गर्ने, तनाव लिइरहने तथा निष्क्रिय जीवनशैली भएका व्यक्तिमा मस्तिष्कघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्ने सिरहा अस्पतालका कर्मचारी निलम्बित सिरहाको लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालले सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारी वासुदेव महतोलाई निलम्बन गरेको छ।
घरखेत बन्धकी राखेर लिएको ऋणले पुगेन उपचार खर्च, चन्दा माग्दै औषधि किन्दै 'घरजग्गा बन्धकी छ, बेच्ने जायजेथा सकियो। रुकुमदेखि काठमाडौंसम्म चन्दा माग्दै आको छु।'
काठमाडौंमा थप तीन जनामा हैजा पुष्टि काठमाडौं उपत्यकामा थप तीन जनामा हैजाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै उपत्यकामा हैजाका बिरामीको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ।
काठमाडौंमा भेटिए हैजाका दुई बिरामी काठमाडौंमा दुई जना बिरामीमा हैजा रोगको जीवाणु देखिएको छ।
कसरी बच्ने सिकलसेल एनिमियाबाट? विशेष गरेर पश्चिम तराईका पाँच जिल्लाका चार हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको सिकलसेल एनिमियाबाट बच्न उपचारसँगै सचेतना फैलाउनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
नेपालमा साउनदेखि ‘हर्मोनन क्लिनिक’ सञ्चालनमा आउँदै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका संविधानप्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी र क्वेयर आदि पर्दछन्।
नेपालीले खाने नुनमा अत्यधिक आयोडिन नेपालमा खाने गरिएको नुनमा अत्यधिक आयोडिन पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाली वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनमा नेपालीले खाइरहेको नुनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिश गरेको मात्राभन्दा बढी आयोडिन पाइएको हो।
विपन्न मिर्गौला रोगीलाई नि:शुल्क रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने पनि बजेटले घोषणा गरेको छ।
दीर्घरोगीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिन डेढ अर्ब विनियोजन सरकारले क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षाघात र मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने भएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा दुई दिने बिदा कति व्यावहारिक?
उस्तै पनि भद्रगोल रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले ‘कोल्याप्स’ हुन सक्ने विज्ञहरूले चिन्ता जनाएका छन्।